Anyị nwalere Ulefone Tiger, anyị hụkwara ya n'anya | Gam akporosis
José Alfocea | | Mobiles, Nyocha, Ulefone
Izu uka ole ma ole gara aga agwara m gi Ulefone Tiger, a ịtụnanya ama ịdị mma dị elu, nnukwu atụmatụ, batrị na-emesapụ aka karịa, nke ahụ na-erughị otu narị euro. Eziokwu bụ na ahụrụ m ya n'anya, mana anwalebeghị ya. Ugbu a ee.
N'ezie enweela m ohere ịnwale Ulefone Tiger ọhụrụ na mmadụ mbụ, na mmetụta m adịla mma karịa ka m tụrụ anya ya. Aga m agwa gị ihe niile, site na nkwakọ ngwaahịa a ruo mmalite ya na n'ezie, anyị ga-enyocha ọnụ ahịa ya, nnweta ya na uru ya.
1 Iwepu Ulefone Tiger
2 Ulefone Tiger: ihe mmetụta mbụ
3 Ihe mkpuchi dị ịtụnanya
Iwepu Ulefone Tiger
Ihe nlereanya m natara bụ Ulefone Tiger na agba ojii ojii na 16 GB nke nchekwa ime na Nchekwa 2 GB Ram. Dịka ị pụrụ ịhụ na eserese eserese na-esote, ama ama a na-abịakwute anyị na igbe ojii ojii mara mma ma n'èzí ma n'ime ya nke anyị na-enweghị ike ịgụ ụdị na akara nke ekwentị ahụ, na akara mmado nke na-agwa anyị asambodo ahụ. Nọmba Europe na IMEI.
N'ime igbe ahụ, Ulefone Tiger dị mma. Na mgbakwunye na kaadiboodu siri ike ma na-eguzogide ọgwụ, a na-etinye ngwaọrụ ahụ na mkpuchi ma ọ bụ etiti yiri nke ahụ ga-eme ka mmegharị ọ bụla dị ntakịrị. Ọzọkwa, ọ abịakwutela m na-eji oji akpụkpọ anụ dị ka ya.
Ọ bụrụ na anyị ewepụta akụkụ a, n'okpuru ya anyị ga-ahụ USB USB Micro USB, chaja mgbidi na usoro Europe (ma na-acha ọcha) na obere broshuọ ebe enyere anyị ụfọdụ ngosipụta ndị gara aga.
Ulefone Tiger: ihe mmetụta mbụ
Ọfọn, ozugbo anyị nyochara nkwakọ ngwaahịa na ihe niile na-abanye na ya, anyị na-ahụ Ulefone Tiger, ama nke mmetụta mbụ ya mgbe eburu ya bụ nke siri ike na ogo.
Site na ịdị arọ nke gram 155 gụnyere batrị, dị ka smartphones ndị ọzọ nke njirimara ndị a, mgbe anyị were Ulefone Tiger anyị nwere mmetụta nke ịnwe ezigbo atụmatụ n'aka anyị, yana incredibly adụ aka, Ahazi gburugburu na oke nkenke na imepụta ya.
Otu nkọwa bụ na mgbe wepu nchedo plastik mbụ na ihuenyo ahụ, anyị ga-achọpụta nke ahụ ọnụ ala ahụ abatalarị na ihe ntinye ihuenyo, ya mere anyị nwere ike ịmalite ịtụnye ya ozigbo n’atụghị ụjọ.
N’akụkụ aka nri anyị nwere bọtịnụ on / off na olu (ma n’ụzọ dị gịrịgịrị na nke edere), mgbe n’elu, anyị ga-ahụ njikọ USB micro na njikọ njikọ jaak 3,5 mm. maka ekweisi (anaghị etinye ya) na na ala, igwe okwu.
Ihuenyo nwere akụkụ nke 5,5 sentimita na mkpebi HD 1280 x 720 pikselụ y Gorilla Glass. Ihe onyonyo zuru oke, agba dị nkọ ma na-enwu gbaa.
N’elu anyi chotara ihe nti na a 5.0MP n'ihu igwefoto (jikọtara ya na 8MP); na n'okpuru, bọtịnụ aka atọ ọdịnala.
Na azụ, na mgbakwunye na ịchọta nrapado (nke anyị nwere ike wepu) yana ntuziaka iji wepu mkpuchi ahụ nke ọma, anyị ga-ahụ igwefoto bụ isi, a 219MP Sony IMX8 igwefoto (nke a na-etinye na 13 MP) nke na-edekọ vidiyo na 1080p na n'okpuru ya, a sọrọ flash na onye na-agụ mkpịsị aka. Na na ala, ndị ọkà okwu.
N'ihe banyere ịrụ ọrụ na mmiri mmiri, Ulefone Tiger gosipụtara onwe ya dị ka a elu arụmọrụ; ya na ihuenyo na-eme ngwa ngwa na alternation n'etiti ngwa bụ agile na ọmụmụ, na ọ bụghị n'ihi na obere n'ihi na o nwere a MT6737 Quad-Core 1,3GHz CPU Ejikọtara ya na 2GB RAM. Ọ bụghị ekwentị kachasị ike na ụwa, mana ọ naghị ewute ya ma ọlị.
Abịa na Android 6.0 Marshmallow arụnyere dị ka ọkọlọtọ, 16 GB nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa na a micro SD kaadị ruo 128GB y SIM abụọ, ya mere anyị nwere ike iburu nọmba ekwentị abụọ ka ọrụ wee ghara ịgwakọta na nke onwe.
Ma dịka i si hụ na foto gara aga, sistemụ arụmọrụ dị n'asụsụ Spanish, yabụ ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla mgbe ị na-ahazi ya na mmasị gị.
Nkọwa ndị ọzọ akọwapụtara nke Ulefone Tiger ọhụrụ nke anyị ekwesịghị ichefu bụ:
SONY 4200 mAh batrị na-enye ihe dị ka ụbọchị abụọ yana n'etiti 480 na 550 awa na njikere.
Chik chipset dị na AWK9 (AW8739) nke na-enye ezigbo ụda dị mma ma melite.
Ike ndọda, Mmetụta Halllọ Nzukọ, Mmetụta, Mmetụta Mbara Igwe
Ọnọdụ ịchekwa ume
Ihe mkpuchi dị ịtụnanya
Dịka m tụrụ anya na mbido, Ulefone Tiger bịarutere na-esote akwụkwọ akwụkwọ akpụkpọ anụ nwere akụkụ semitransparent nke na-ahapụ bọtịnụ na njikọta niile ka ị na-enye nkwado na nchekwa. O siri ike "fattens" ọnụ, ya mere ọ dabara adaba.
Ihe kachasị dị ịtụnanya banyere ikpe a bụ windo ya dị obosara nke na-enye anyị ozi bụ isi yana, na mmegharị dị mfe, na-enye anyị ohere ịnweta njikwa ụfọdụ.
Ihe ọhụrụ Ulefone Tiger bụ dị na mbara igwe ojii, oghere ntụ ma ọ bụ ọla edo champeenu, na 16GB nke esịtidem nchekwa na a price nke erughị € 100 Site na ndị na -ere mba ofesi dịka Aliexpress, Gearbest, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nyochaa: Jose Alfocea
Formanrụ ọrụ na ike
Ọ naghị abịa na gam akporo 7.0 Nougat
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Anyị nwalere Ulefone Tiger, anyị hụkwara ya n'anya
Google On bu Google WiFi ugbu a